Na agụụ Decapsulator emepụta ikuku ugboelu ịgbanwe 4-5bar abịakọrọ ikuku nyere site n'èzí ikuku iyi n'ime elu ugboro pulsed agụụ. The elu ugboro pulsed ikuku nọgidere na-adọrọ capsules na-arụ ọrụ ụlọ na n'ime otu oge. N'ihi ya, capsules ikewapụ nwayọọ nwayọọ; ntụ ntụ ma ọ pellets n'ime daa n'ime gbọmgbọm. N'ihi mgbanwe agha kama nke n'ibu agha, Capsule shells na-kpam kpam na-emebibeghị; dịghị ibe akwụkwọ kere usoro a.
Osote: Capsule Checkweigher CMC-1200